Indrisy nefa fa fomba fiteny fotsiny ihany izany fa raha ny fihetsika atao dia tsy mijery ny tena fototra izany ny mpitondra. Ahoana tokoa moa ny hiheverana fa ny zanak’ireo tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena dia mianatra any amin’ny sekoly tsy miankina avokoa ? Tsy misy na iray aza no mahita ny tena fahorian’ireo zaza madinika eny amin’ny sekolim-panjakana. Eny fa na hatreny amin’ny oniversite aza, dia matetika mandeha manohy fianarana any ampita ny zanak’ireo tompon’andraikitra. Dia ho tsapan’ireo tompon’andraikitra ve ny tena olana misy eo amin’ny fampianarana Malagasy ?